Etu aga - esi bulie ihe edeputara n’inyocha ihe eji achọ ihe na 2014 | Martech Zone
Etu esi achota ihe ederede gi maka ihe nchoputa na 2014
Sọnde, Septemba 7, 2014 Sọnde, Septemba 7, 2014 Douglas Karr
Anyị na ndị ahịa anyị ka nwere ọzụzụ ọzụzụ iji dokwuo anya ọtụtụ ajụjụ gbasara injin ọchụchọ yana otu esi ede iji melite ọhụhụ gị. Plain na mfe ị naghị ede maka engines ọchụchọ, ị na-ede maka ndị mmadụ. Ekwenyere m na algorithms nke Google emechaala mata ndị edemede na ikike, ịkekọrịta na ewu ewu, amaokwu maka ọdịiche, yana ọdịnaya iji zụọ ebumnuche nke onye nyocha ahụ.
Detuo bụ otu akụkụ dị mkpa nke njikarịcha Nchọgharị Nchọgharị na saịtị. Mana site na Google na-akwalite mmelite algorithm ọhụụ na-agbanwe iwu nke egwuregwu ahụ, ọ na-esiri ike ịdebe ihe na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, ọ na-esiri ike ịmata ma mgbalị kachasị gị na-eme karịa ihe ọma na ogo gị. Ndị a bụ ndụmọdụ 13 ga - enyere gị aka ide ọdịnaya nke ruru na 2014. Michael Aagard, ỌdịnayaVerve
Na 2014, ihe ọmụma ahụ na-elekwasị anya na ahụmịhe ziri ezi maka onye na-agụ ya. Ekwenyeghị m n'eziokwu na nke a bụ Ederede Ederede SEO, M ga-arụ ụka na Atụmatụ ndị dị nnọọ ukwuu copywriting Atụmatụ. Site na SEO, enwere ohere iji hụ na egosiputara ọdịnaya dị mma na saịtị gị n'agbanyeghị. Na-akpali akpali aha, isiokwu ndị metụtara ya, saịtị na igodo ndị isi, mgbasa ozi a na-ahụ anya, nzaghachi mkpanaka… akụkụ niile ahụ kwesịrị ijikọta na usoro ọdịnaya gị iji hụ na ahụmịhe onye ọrụ dị egwu. Mgbe nke ahụ mere, nnukwu ọchụchọ engine ogo ga-eso!
Tags: 2014 SEOọdịnayacopywritingusoro edemedeMichael Aagardoyiri copyondụmọdụ nduzi ederedeederede ederede maka ọchụchọ
Otu echiche dị iche iche maka ire ahịa nwere ike ịhapụ ụlọ ọrụ gị $ 4 Nde kwa afọ